FIIRSO:-Taliyaha Saldhiga C/casiis “Gabdhaha Waxa lagu qasbaa in jirkooda ay iibsadaan” – War La Helaa Talo La Helaa
FIIRSO:-Taliyaha Saldhiga C/casiis “Gabdhaha Waxa lagu qasbaa in jirkooda ay iibsadaan”
Taliyaha Saldhiga Bari ee Degmada C/casiis ee Gobalka Banaadir ayaa ka dhawaajiyay Arrin aay aad ugu naxeen shacabka Soomaaliyeed.
By madoobe	 Last updated Oct 31, 2018
Taliyaha Saldhiga Bari Degmada C/casiis ee Gobalka Banaadir, Dhame Axmed C/laahi (Calooley)ayaa sheegay in”Gabdhaha Maandooriyaha la baro lagu qasbo in jirkooda ay iibsadaan.
Taliyaha ayaa shaaciyay magacyada Hoteelada gabdhahaasi la geeyo ee ku yaalla Degmadaaasi,balse Maamulka Gobalka Banaadir aay awoodi waayen in albaabada aay iskugu dhuftaan si loogu hortago ama loo xakameeyo dhibaatada ka imaan karta.
Arrinta uu Taliyaha ka dhawaajiyay ayaa qabiiro dhanka Amniga waxaay qabaan in aynan aheyn, mid ku habooneed in Warbaahinta uu ka sheego maadama aay keeni karto halis dhanka Amniga sabab la xariirta Maleeshiyada Al shabaab oo inta badan ku baneesta hadalada nuucaas oo kale ah dhiiga Shacabka aan waxba galabsan ee u nasasho taga xiliyada fasaxa Xeebta liido.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobalka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab ayaa sidaan oo kale horey ugu dhawaajisay in Hoteelada ku yaalla Xeebta liido noqdeen goobo lagu tunto laguna iibiyo gabdhaha taaso durba keentay qatar amni maadama Afhayeenka Kooxda Al shabaab ku hanjabay in aay weeraro ka fulin doonaan.
“Hadalada aan loo meel dayin ee Masuuliyiinta Dowladda qaarkood Warbaahinta ka sheegan ayaa mararka qaar noqda kuwa dhibaatoyin usoo jiida dadka shacabka ah.
Nicholas Hyssom:“Soomaalida Xal Ha u Helaan Dhibka dhexdooda!!
Wasiir Cawad: Abiy Axmed Wuxuu yiri, Farmaajo Ayaa iiga MuhiimsanTrump!!